Chakwasa ihie: Marketpath CMS na Ecommerce | Martech Zone
Wenezde, August 24, 2011 Saturday, January 23, 2021 Douglas Karr
Marketpath na-enye ndị ọkachamara webụsaịtị imewe, mmepe, yana ọrụ mmejuputa ndị na-eso Marketpath 5D: Chọpụta, Kere, Depụta, Nyefee, na Mbanye.
Marketpath dị ebe a na mpaghara ma anyị kesara ụfọdụ ndị ahịa. Marketpath emeela ihe ịtụnanya ọrụ na-enye a keukwu CMS na integrates gị usoro njikwa ọdịnaya na nhọrọ ụlọ ahịa ecommerce mbọ.
N'ebe a Matt Zentz, onye isi na Onye guzobere ya, na Kevin Kennedy, Onye isi ahịa ahịa, na-atụle ngwaahịa na ọrụ ha na-enye ndị ahịa ha. Ha emeela nnukwu ọrụ nke imelite CMS ha iji nweta ma nyocha ma ekwentị maka ndị ahịa ha - ndepụta na-aga n'ihu na-eto eto kwa afọ!
Ekele dịrị ndị mmekọ vidiyo anyị na 12 Kpakpando Media maka nnukwu mmepụta!
Tags: 12 kpakpando mgbasa oziCMSusoro njikwa ọdịnayaAjụjụ ọnụKevin kennedymatt zentz